Apple waxay dooneysaa inay ka furato Dukaankii ugu horeeyey ee Apple Store Koonfurta Kuuriya meel u dhow xarunta Samsung | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay dooneysaa inay furto Dukaankiisa ugu horeeya ee Apple Store ee Kuuriyada Koonfureed agtiisa xarunta Samsung
Loolanka u dhexeeya Samsung iyo Apple, wixii ka dambeeya in maxkamad lagu soo gabagabeeyo in ka badan hal jeer, waa mid midho dhal badan ugu yaraan dadka isticmaala ee iibsada qalabkoodaAma Apple ama Samsung. Sannad kasta shirkado kasta waxay isku dayaan inay horumariyaan kan ay xifaaltamaan iyagoo ku soo bandhigaya howlo cusub ama muuqaalo taleefannadooda casriga ah, taas oo ah meesha uu dagaalku u dhexeeyo labada shirkadood runtii ka dhaco. Sida aan ka aqrin karno joornaalka 'Wall Street Journal', shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waxay tixgelin siineysaa furitaanka Dukaankeedii ugu horreeyay ee Apple ee Koonfurta Kuuriya, dhab ahaan Seoul.
Sida muuqata goobihii ugu horreeyay ee shirkaddu raadisay waxay ku yaalliin agagaarka xarunta Samsung. Waqtigan xaadirka ah Kuuriyada Koonfureed waa suuq aamin u ah wax soo saarka dalkeeda, Apple-na waxay si dhib yar ku leedahay saamiga haraaga ah, qayb ahaan sababtoo ah kuma haysato dukaanno u gaar ah dalka, inkasta oo aysan ahayn sabab run ahaantii qiil u heli kara tirooyinka iibka ee hooseeya. Dhibcaha kaliya ee iibka ee laga heli karo Seoul waa iyada oo loo marayo iibiyayaal idman.
Hadda Kuuriyada Koofureed waa dalka afaraad ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda Aasiya, oo sannado badan waxay suuq aad u adag ku ahayd shirkadda Apple. Waqtigan xaadirka ah 80% iibka qalabka casriga ah ee laga sameeyo dalka waxay u dhigantaa Samsung iyo LG, oo labaduba ka socda Kuuriya.
Sida laga soo xigtay daabacaadda Apple waxay raadineysaa meel ka mid ah aagga sare ee Gangman, oo u dhow tareenka dhulka hoostiisa mara iyo xarunta tareenka ee magaalada oo dhan, saldhigan oo dhowr mitir u jira xarunta Samsung. Suuqyada bariga waxaa lagu gartaa wax soo saarkooda qaran inay aamin yihiin, sidaa darteed waxaan si dhab ah uga shakisanahay furitaanka Dukaanka Apple ee dalka waxay beddeli kartaa saamiga suuqa ee ay gacanta ku hayaan soosaarayaasha Samsung iyo LG. Sida ku xusan wararkaas xanta ah, ee Apple aysan xaqiijin, Apple waxay qaadan kartaa wax yar oo sanad ah in lagu furo albaabada Dukaankan Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Apple waxay dooneysaa inay furto Dukaankiisa ugu horeeya ee Apple Store ee Kuuriyada Koonfureed agtiisa xarunta Samsung
Sida loogu daro widget-yada xarunta ogeysiiska macOS Sierra
IOS 10: Batariga, waxqabadka iyo dhinacyada kale ee la tixgelinayo